Ergayga QM ee Geeska Afrika ayaa soo afjaray booqashadiisa Somalia, isagoo horumar u rajeeyay 2020 | UNSOM
23:59 - 03 Apr
"Waxaan arki karnaa tirooyin badan oo horumar oo la meel dhigay. Waxaa jira rajo, waloow ay caqabado badani jiraan, iskama caabbin karaan dadaallada wadareed ee Beesha Caalamka," ayuu yiri Ergayga QM u qaabilsan Geeska Afrika Parfait Onanga-Anyanga.
"Rajo ayay i gelinaysaa, maadaama uu dalku ku howllan yahay geeddi socod muhim ah oo doorasho, in wax kasta loo sameeyn doono qaab xoojinaya guulaha ilaa iminka la sameeyay, si loo xoojiyo nidaamka iyo kala dambaynta iyo qaab dhismeedka dowladnimo," ayuu daba dhigay.
Ergaygan QM ayaa labadii maalmood ee tagey ku qaatay magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, halkaasoo uu kula kulmay metelayaasha caalamka oo uu la jeex jeexay amaanka gobolka, doorashooyinka, horumarinta, aadminnimada iyo arrimo kale.
Kulamada Mr. Onanga-Anyanga ayaa waxaa ka mid ahaa mid uu la qaatay Ergayga Geeska Afrika ee Somalia, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, Balal Mohamed Usman, kaasoo uu kala hadlay muhiimadda wada xaajood bash bash iyo baraare gobolka ka dhaliya.
Goor danbe, wuxuu Mr Onanga-Anyanga la kulmay Guddoonka Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ibraahim, oo uu kala sheekaystay caqabadaha iyo fursadaha ku aaddan doorashooyin daah furan oo "qof iyo cod ah" oo dalka ka dhaca.
"Doorashooyinku waxay noqon karaan dib u heshiisiin qaran, balse waxay sidoo kale gacan ka gaysan karaan khilaaf dhaca, sidaa darteed, geeddi socodka doorashada waa inay taageertaa QM," ayuu yiri Ergaygu.
Mr Onanga-Anyanga ayaa sidoo kale la hadlay wakiillada ururrada Bulshada Rayidka, si hoosta looga xarriiqo siyaasad ay door ka ciyaaraan haweenka iyo dhallinyaradu.
Wuxuu sidoo kale ku boorriyey inay iskaashi la yeeshaan QM maadaama howlo badan oo ay qabtaani ay asaasi u yihiin shaqada QM.
"Waxaan Muqdisho ka tegayaa anigoo ay ii korortay rajada aan ku qabo kartida dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda si ay uga siraad koraan caqabaadka ay haatan wajahaan," ayuu raaciyey Ergaygu.
Mr. Parfait Onanga-Anyanga ayaa sidoo kale wada xaajood la yeeshay wakiillada diblomaasiyiinta dalalka Geeska Afrika iyo gobolka Badda Cas, oo ay wehliyaan Danjirayaasha jaalasha Somalia ee caalamiga ah.
 Qorshaha ka falcelinta arimaha bani’aadamnimada ee 2020 ayaa ubaahan 1 bilyan oo doollar si ay u caawiyaan 3 Malyan oo Soomaali ah
 Ergeyga Gaarka ah Qaramada Midoobay ayaa tilmaamay faa’iidooyinka wada shaqeynta iyo taageerada hay’adaha Qaramada Midoobay booqashadii uu ku tagay Hargeysa